Maxaa keena AutoCAD 2009 - Geofumadas
Febraayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Muddo badan kahor ayaan ka hadalnay Nafaqada AutoCAD 2008 iyo AutoDesk horay u sii daayay qaar ka mid ah hagaajinta ah ee version 2009 loo yaqaan AutoCAD Raptor ayaa yeelan doona ... inkastoo uu ogaaday taariikhdiisa ee sanadaha 25 Waxaan ognahay in tani aysan ahayn sanad isbeddel ah oo ka baxsan qurxinta.
1. Ku saabsan Hawlgalka nidaamyada kale
Iyadoo Windows Vista
AutoCAD 2009 waxay hubisaa in shahaadada la siinayo ay la shaqeyso Windows Vista (taasi waa, sanduuqgu wuxuu leeyahay calaamad u dhiganta ...)
Oo kan shahaado Windows Vista si joogto ah u ordaan sax ah? ... oo kadis ah aan bilaabay inuu ka quusanina maxaa yeelay khayraadka la filayaa in ay haystaan ​​qalab ah, haddii riix Windows Vista oo aan dual muhiimka ah waa destrompa. Waxay kaliya ka shaqeysaa Windows XP Home Edition iyo wixii ka dambeeya.
Waxaad aan ka akhrisan kartaa file DGN ah, kaliya waxa ay soo dhoofsadaan, ma horumar badan AutoCAD 2008, kaliya maareynta hantida daaha waa ka badan saaxiibtinimo ay dhacdo files ka soo DGN a ... ah, iyo waxay noqon kartaa V7 ama V8. Waxaan arki doonaa haddii hal maalin uu sameeyo waxa tartanku (Microstation), oo qaatay qaabka dwg sida asal ahaan.
2. Isbedelka kudhaca interfaceka.
interface ayaa hadda si dhow ula ekaan Office 2007, istaraatijiyad su'aal qaar ka mid ah, laakiin in shuruudaha of geynta ku yimaado anfacaya marka la isku dayayo si ay u ilaaliyaan ah deegaan la mid ah isticmaalka caan ah ... ilaa inta aadan wada qaadan by isbedelka la buunbuuniyey in interface ah isticmaala
Inkasta oo ay tahay wax la isku qurxiyo, waxa jira waxyaabo fiican oo tan:
Qalabka-qaababka qaab-dhismeedka Ribbon
Tani waa mid ka mid ah isbeddelka ugu wanaagsan, ee ah in hay'adaha amarrada ay ka soo baxaan baararka aan caadiga ahayn ee looxaayo koox wadaag ah oo dukaamada ku dukaameysta oo si sahlan loogu habeyn karo. Dabcan waxay naga qaadi doontaa qiimaha bilowga ah ee aynu mar hore u haysanay hab isku mid ah inta badan amarrada la isticmaalo.
Hadda waxay ku jiraan guddi ka siman, mar walba isugu keenaa in amarrada abuurka (ISKU AADKA), edit (beddelo), boundedness (dimmensions) ... laakiin haatan u imid inaan layers ah (layers) iyo kuwa kale oo darfaha in looga yeedhay oo kaliya marka loo baahan yahay, laakiin saamaynta marka lumo waqtiga hal mar la furo joodariyeyaasha guddiga sawir kasta mar kasta oo qabyaaladdu ku taal. Sidoo kale, sidoo kale, sida Xafiiska, waxay mudnaan la siiyaa si loogu isticmaalo qaab semi-automatic ah.
Qiimaha tani waxaa lagu aqoonsanayaa dadka isticmaala Microstation, kuwaas oo jecel caqligalka ah ee aan laheyn in ay furaan albaabbada pop-up loogu talagalay xakameynta lakabka ama xulashada kuwan daruuriga ah ... si ay u bixiyaan tusaale.
Isbedelada kale ee kujira istcimaalka waxaa ka mid ah «browser-kaaga«, Kaas oo soo bandhigaya daaqad dhinac ah awoodna u leh sahaminta feylasha, amarrada, iyo agabyada kale ... waan arki doonnaa haddii ay sidaas waxtar u yeelato.
Qalabka adeegsiga degdegga ah, taas oo ay sameeyeen waxay ogaadeen meesha ay ku dhejinayso amarrada guud (cusub, badbaadin, daabac, nuqul, dhoobo ...)
Booska, mmm, mmm, kaliya caawimaadda, oo leh mashiinka raadinta isku dhafan iyo suurtagalnimada in la geliyo jadwalka inkasta oo ficil yar oo ka mid ah dadka isticmaala Autocad isticmaalaan caawimada maxaa yeelay waligood ma ahan mid saaxiibtinimo.
Aqoonsiga xaaladdaTaasi waa calaamadaha kuwa ortho, Roobka, osnap, LWT hadda colcan in bar hoose si ay u xidhmin yar ... xiiso in ay yihiin qaar ka mid ah waxaa muhiim ah in ay helaan oo xuduudaheedu isticmaalaya qaababka, unugyada iyo wax hore oo kaliya shaqeysiin by laga bilaabo khadka taliska.
3 Isbedelada hawlgalka taliska
AutoCAD 2009 waxay raadineysaa inay xalliso dhibaatada farshaxanka miiska, halkaasoo ay ku xiran tahay qalab badan iyo habab gaar ah oo lagu gaarey qaybo qiimo leh oo ka mid ah:
Meelaha hantida waxay tagaan guryaha Quick
Had iyo jeer waa wax aad u faa'iido leh, laakiin waxay ku xanibmeen meesha uu ku daboolay, hadda markaad ka guurto cursorka shayga ama alaabta amar-gareeyey. Waxaan rajeyneynaa oo aynaan noqonayn wax isdabamar ah oo naga dhigaya inaan xasuusto xusuusta shaqada, talada waxay u muuqataa mid wanaagsan; Waanu arki doonaa haddii aad ku guuleysan karto dagaalka si aad u hesho mawduucyada xuduudaha ee tartankaaga.
Waxyaabaha kale ayaa noqonaya “Degdeg”
Tilmaamaha u dhexeeya goobta shaqada iyo fikradaha (aragtiyo iyo qaabab) hadda waxay la yimaadaan siyaabo kale oo lagu soo celinayo habka salaadda haboon ee habeenkii (calaamadaha hoose ama liiska sare). Isla waa isku mid in loo isticmaalo sababta oo ah waxay ku dhejiyeen kumbuyuutarka leh ctrl + tab, badhanka midigta ee jiirka ama qaar ka mid ah astaamaha baraha xaaladda.
Xitaa "aragtiyada la magacaabay" waxay lahaan karaan guryaha geyiga ah (kaliya seddex) iyo wareejinta qaabka PowerPoint (muuqaalka / muuqaalka mooshinka).
Raadi si aad u badbaadiso hababka soo noqnoqoshada
Tani waxay ku kacday wax badan oo AutoCAD ah, maadaama amarradu yihiin kuwo toosan oo wax yarna ay u soo fuuleen waxyaabo ay ka mid yihiin: Taliska bilaawga ah, galida, masaafada fog, galida, jihada dhamaadka, amarka dhamaadka ... haddii aad rabto inaad mar labaad sameyso talaabooyinka 5. . Faa'iido xumadan ayaa noo keentay inaanu noqono khabiiro leh qaab-fureyaasha furaha, gacanta midigta leh jiirka iyo bidix si loo jaro xarfaha ama furaha "esc" lama huraan ah.
Xaaladdan, AutoCAD 2009 waxay raadineysaa wax la yiraahdo «Diiwaaniyaha waxqabadka», oo la mid ah keydinta macros, waxaa macquul ah in nalaga dhigo illoobin keyboard-ka iyo amarrada qoraalka ... Waxaan si run ah u maleynayaa inay ku kici doonto wax badan maxaa yeelay waan baranay oo xitaa waan jeclaannay. Waxaan ku doodi lahaa AutoCAD aniga oo raadinaya fikradda ah "amarka had iyo jeer waa mid firfircoon" iyo menu macnaha guud, markaa markaa waanu iska illoobi karnaa ereyga keyboard.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan aqoonsanahay in isbeddelladani ay u fiicnaan doonaan jiilalka cusub, iyo iyaga loogu talagalay shaqeynta loo yaqaan «Qalabka» in haddii aad jiirka aad geliso xariiq waxay kuu sheegaysaa «aad qortid pointer ka badan wax lagu magacaabo caawimaad online sharxi kara sida loo sameeyo line a, sidoo kale internetka ka heli kartaa sida loo sameeyo line a, oo ha iloobin fiiriyaan our siyaabo 25,456 blog si ay u sameeyaan line a on«... waxtar leh? laga yaabee laakiin uma maleynayo inay sii socon doonto muddo dheer haddii aysan siinin wax qabad wanaagsan.
4 Amarada la hagaajiyay ... dhowr
Mtext. Hadda waxaad sameyn kartaa hubinta qorista intaad ku qoreysid, waxaan fahamsanahay in Isbaanishka ay ku jiraan.
Raadi oo beddel. Hadda baaritaan ayaa soo saara liis ah oo samayn kara habab toos ah oo bedelaya ... ma aha qoraallada kaliya.
Nalalka iyo 3D. Inkasta oo ay ku dar yar oo faa'iido ah si VSLIGHTINGQUALITY, wax yar baa laga helay by saxba 3D, waayo, dad badan isticmaalaan codsiyada kale AutoDesk ... si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kuwa waxay sameeyaan yaabab. Waxay fuliyaan ViewCube, taas oo ah kontarool lagu xakameynayo walxaha saddex qeybood, waxay u muuqataa in ay gacan ka geystaan ​​hawlaha aasaasiga ah ama ugu yaraan fududeeyso xulashada iyo Hagaajinta Shirkadaha wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku duulo meel 3D ah ama abuurto isdaba-marin tirtiran.
Goobta. Wixii ugu fiican ee nuqulkan keena, inkastoo aynaan aad u faraxsanayn; aan ka qabashada Saadaasha, ka dhigaya Map3D AutoCAD, AutoCAD laakiin ugu yaraan 2009 ku daray ikhtiyaarka in ay la tacaalaan loolka / dhigaha iyo awood u leh inay abuuraan jaamcadda in goobta. Inkastoo aanad abuuri karin shabakad labadaba UTM sida joornaalada juqraafi.
More, ma jiraan wax hadda, hadda waa taas Heidi ayaa faallo ka bixiyay, Marwada A kuwaas oo u eg xaas wanaagsan laakiin imparts shirarka weyn dhacdooyinka sanadlaha ah ... iyada oo duqaynayay faham ku Hispanic ... Ingiriisi iyo tirada a na baxo yaaban sida waxaa jiray markuu guursaday uu fasalada koowaad ee AutoCAD in 1986 .
Waxaan rajeyneynaa horumarinta isdhexgalka la Google Earth, Waxaa la filayaa in sanadka intiisa kale waxaan sii wadi doonaa inaan tirinno dheeraad ah, badanaa bisha April AutoDesk waxay soo saartaa alaabteeda. Hadda AutoCAD 2009 Raptor waa beta beta, waana la soo dejin karaa haddii aad u diiwaangashan tahay shahaadada beta.
Waxaad arki kartaa fiidiyowga ah horumarinta qaar ka mid ah blogka Donnie Gladfelter
Waxa kale oo aad arki kartaa dib u eegista user ee Todo Arquitectura ku saabsan sida ay noqon doontaa AutoCAD 2009
Post Previous«Previous Geofumed on duulimaadka, February 2007
Post Next Yaa ku xiran GeofumadasNext »
52 jawaabta "Maxaa keenaya AutoCAD 2009"
Waxaan kale oo aan mar kale weydiistaa koodhka firfircoonida ka dib markii la geliyay mar marka si guul leh ...
Julio Arroba isagu wuxuu leeyahay:
Qof iga caawiya ku rakibtay 2009 autocad oo i ahroa reorders code hawshooda u mar la isticmaalayo keygen oo ku abuuraa code cusub introdusco caleemo waxaa si guul leh imlmaha laakiin markii aan iga fura autocad reorders dardargelinta qof i siin karaan a caawiyo dhibaatadan .... mahad
TITE74 isagu wuxuu leeyahay:
Autocad 2009 waxay u fiican tahay dadka yaqaanno sida loo isticmaalo, waana udub dhexaadka
Nico isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in ay tahay wax khiyaano ah ...
Sida ugu fudud uguna fudud ee loo adeegsan karo waa iswada 'Autocad 2004' ama '2006', waxay isticmaalaan ilo aad u yar isla markaana si dhakhso leh oo dhib badan ayay u adeegsadaan; Xiriirka isticmaaleha ayaa ka sahlan oo toos ah. Waxa kaliya ee ay 2009 sameyso waa in la isku daro dhammaan aaladda, wax walba la beddelo, la murugoodo is-dhexgalka isla markaana noqdo madax xanuun kuwa innaga ah ee ku takhasusay nooca 2006, maadaama aan gaarno natiijooyin isku mid ah waa inaan ku qaadannaa saacado baarista « halkay joogaan "waxay rabeen inay isla qalab dhigaan oo" magaca cusub "ay la soo baxeen.
Autocad 2006 wax badan oo toos ah oo qoto dheer.
Ilaa inta aan ogahay, ma awoodid, haddii ay tahay in ay sameeyaan baaritaan sharci ah, waxay ku weydiinayaan shahaadada saxda ah ee ku soo gala sanduuqa, halkaasoo lambarka taxan ee badeecadu yahay.
Waxaan fahamsanahay in kaalmo / ku saabsan sirta ay u muuqan doonto, haddii aad u aragto oo aad wacdid qaybiyahaaga AutoDesk ee degaanka ah tani waxay kaa heli kartaa macluumaad haddii ay tahay mid sharci ah oo magaceeda la helay.
bra isagu wuxuu leeyahay:
maqla asxaabta Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u ogaan karo haddii uu autocad q ku rakibo kombiyuutar ayaa horey u sheegay q asalkiisu ahaa asalka oo aan tirinta diskka ama buugga isticmaalka dhinac kasta iyo kan kaliya ee ahaa disk ee budhcad-badeedda on miiska porfa haddii qof uu ogyahay oo ii sheegi karaa ... iigu ii soo dir boostada my berna.cr@hotmail.com
Waxaan ka faallooday in xitaa haddii uu qof haysto, rakibayaashu waxay miisaami karaan wax ka badan 900 MB, ma jiro waraaqo aqbala faylka cabbirka xajmiga ah ama lifaaqa inuu sameeyo sidaas.
Dhibaato yar ayaa i haysata… Ma aanan awoodin inaan soo dejiyo wax nooc ah nooc kasta oo waxaan u bahanayaa si deg deg ah ... haddii qof uu leeyahay fadlan ila iigu gudbi emaylkayga anairam_923@hotail.com gracias
Haddii aad rabto waa in cuntooyinkaagu ay ku qoran yihiin Ingiriisi, taasi macquul maaha, waa inaad ku dhejisaa qaybta Ingiriisiga ah. Qaar ka mid ah software-yada sida gvSIG ayaa u oggolaanaya, laakiin AutoCAD maahan.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho amarradaada af Ingiriis, waxaad ku qasban tahay inaad ku darto qayb hoose, tusaale ahaan:
Isbaanish waa inaad ku qortaa khadka taliska
iyo hadaad khadka wax ku qorto ma aqbali doono maxaa yeelay waa nooca Isbaanishka
si aad u qortid _lineed
CTN isagu wuxuu leeyahay:
Waa salaaman tahay, welwelkeygu waa tan soo socota waxaan ku leeyahay "Autocad 2009" oo Isbaanish ku rakiban. Waxaan la yaabanahay haddii ay jiri doonaan amar u tarjumi kara Ingiriisiga kaliya mahad ...
waad ku mahadsantahay isagu wuxuu leeyahay:
Kama qaadi karo autocad2009.-
qof ayaa joogi kara
tincho isagu wuxuu leeyahay:
Koodhkan waxaa loogu talagalay autocad 2008, waan kugu mahadnaqayaa.
Haddii qof uu soo saaro koodhkan, waan kuu mahadcelinayaa, waa inay noqotaa nidaam qalliinka ah ee 64. waad ku mahadsantahay
haddii ay ku jirto mid ka mid ah 32 ma shaqeynayo midka tuuraya.
YCNK Q7RE TEP7 DU53 SI LOO HELI KARIN
oo waxaan xambaarsan yahay xxNUMX ugu dambeyn xayawaanka daaqadaha
hello, Waxaan haystaa autocad 2009 oo lagu rakibay nidaamka qalliinka ee 64, waa mid gaabis ah, iyo inaan haysto 4gb, a pheno quad core, iyo 9800 gtx + geforce board, tilmaamahu wuxuu xirayaa wax walba markay marayaan xariiqyo iyo / ama cabbir , u tag wax kasta, waa hoos u dhac in loo shaqeeyo sidan oo kale. Waxay ahayd inaan rakibo sababtoo ah ma heli karo keygen-ka bitgen '2008 64 keygen ee aan haysto nidaamka shaqadeyda. Haddii uu jiro cid u baahan fadlan iigu soo dir e-maylkayga hadda ka dib waan ku mahadin doonaa. flacolava@hotmail.com
Halkan waa mid , waxaad ka heli kartaa dadka kale Arquumentuba
martha puello isagu wuxuu leeyahay:
fadlan yaa leh buug gacmeedyo cad 2007 iyo 2009 oo aad iigu soo diri karto emailkeyga waan kuugu mahadcelinayaa dareenkaaga martha.puellovega@gmail.com.
Ma jecli gebi ahaanba menera maxaa yeelay waxaa lagu qaabeeyaa 3d in 2009 waxaas oo isku dayaya in lagu daydo sawirka waxaanan horeyba qashin ugu sameeyay moodhalka sahlan markey tuur tuubo barnaamijkaan wuxuu isku dayaa inuu ka shaqeysto wajiyada ka hor intuusan fiicnaanin isla markaana jahwareer badan weligiisna uusan dhicin. waxay u ekaan doonaan sida sktchup tani waa ua mierdaaaaaaaaa.
Emilce isagu wuxuu leeyahay:
Su'aashaydu waa sidee loo sameeyaa si loo soo dejiyo intefaz ee version hore?
qof ayaa i caawin kara ...
laaluush isagu wuxuu leeyahay:
sababtoo ah ma bilaabaan cunto karinta, way fiicnaan lahayd, wayna farxi lahaayeen.
Dani Pérez isagu wuxuu leeyahay:
ka version 12 Isticmaal Autocad kor u Muga 3D, waayo-aragnimo ii sheegayaa in qoraalkii cajiib ah waa KAKA this Ogaagasha version 2009 horumar kaliya in ay keentaa waa xafiiska nooca bedeley oo aan doonin inaan wax tan iyo markii aan autocad kartoo leh keyboard iyo anigu ma icon mana toolbar shaashadda (sida wax is-ixtiraamida xirfadeed). Lafta aan uninstall doontaa 2009 iyo 10 sugi la sii daayo. By habka aan ku leeyahay Maquinon la xeon 8 32 iyo GB ee wanka, waayo infographics.
FRANCISCO GREMO ARNAUDO isagu wuxuu leeyahay:
wa barnaamij aan u isticmaalo 14 illaa 2008 oo leh natiijooyin aad u fiican mahadsanid
Enteri isagu wuxuu leeyahay:
Gudbinaynaa Mr.. Inkasta oo dad badan ayaa sheegaya wanaagsan oo hore waa xun ka dibna weydiiyo sida loo helo ILAALI ah, waxaan qabaa inaan u yihiin in hadalka ku saabsan tusaale ahaan dheeraad ah, Waxaan la isticmaalayo AutoCAD muddo dheer, ka R13, ilaa hadda 2009, Anigu waxaan haystaa Xeon of 3.0 GB, 3 GB of computer RAM iyo mitico Win XP ... maanta isku dayaan in ay ku shuban profile a Jooloojiyadda of sheets 12 iyo sudhay kor ii on mar kasta in lamina 8, daaqadaha iyaga ugu rarataan culaysyo galay kayd oo run ahaantii waxaan ka heli nuugayo barnaamijka, wax badan waa raagay, ka duwan 2006 aan sidoo kale ku rakiban iyo umado, ma ay helin jidka in pages iyaga ku shuban ka RAM, laakiin waxaa run ahaantii waa xun, ku baabbi'iyee badan oo khayraadka in aan isticmaalin ... my Fikrad shakhsiyeed waa in haddii ay suurtagal tahay in ay ku rakibaan, si fiican u haaweyn oo ay la shaqeeyaan qoraaladii hore ee ka shaqeynaya si ka fiican ...
Suarez isagu wuxuu leeyahay:
Salaanno aadan samayn karin faallooyin ku saabsan AutoCAD 2009 haddii aanad maalin kasta wax ka qaban barnaamijyaduna ay ka fiican yihiin
!! AutoCAD R12?, Tani waa DOS?
vnecviox isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in autocad 12 ay fiican tahay, weli waxaan isticmaalaa
Waxaan u maleynayaa in siyaabo kale oo shirkado ah oo aan iibsan karin AutoCAD qiimaha oo aysan rabin in burcad-badeedku yihiin kuwa ka mid ah lineka IntelliCAD, waxay u shaqeeyaan sidii AutoCAD laakiin waxay u qalmaan qiyaasta $ 300.
Haddii shirkad ama xirfadle ay bixiso $ 700 kombiyuutar, waa inaad awoodaa inaad iibsato mid ka mid ah ruqsadahaas iyada oo aan la siin budhcadnimo.
FAILEL isagu wuxuu leeyahay:
Waxa aad sheegeyso waa run, waa maalmaha tijaabada 30 ka dibna waa inaad iibsataa, dhibaatadu waxay tahay in barnaamijyadani aad u qaali ah. Ilaa iminka 250 MB ee RAM wuxuu taageertaa Windowa Vista, laakiin waxaan dhab ahaantii ka fekerayaa inaan sii kordhiyo awooddan ugu yaraan 350 MB. Waad ku mahadsantihiin xogta!
Barnaamijyada leh maalmo xaddidan 30 waa sababtoo ah waa inay iibsadaan taariikhdaas. Maaha lacag la'aan.
Just ka mid ah cajiib, 250 MB RAM iyo taageero Windows Vista?
Hello! Recently helay laptop ah Toshiba 4 250 GB RAM iyo yimaado la Windows Vista Home Premium, ii ogolaadaa in si fudud loo soo dajiyo 2008 AutoCAD iyo / ama 2009, laakiinse anigu uma aan kaakicin laga yaabaa mid ka mid ah laba barnaamij (had iyo jeer ka heli baadi !!! ) iyo sida qof kor uga hadashay, abuuraa waqtiga xadidan (maalmood 30) si aad u bilowdo barnaamij kasta ama haddii kale la xakameeyo (in this waxa uu noqon lahaa ugu wanaagsan ee looga fogaado in uninstall barnaamijka hor inta uusan xirmin ah, in markaas ma aha in uu ogolaan samee). SU'AAL: Sidee ayaan u dhaqaajiso mid ka mid ah laba nooc oo AutoCAD (gaar ahaan 2008) on computer this ????
Maya, malahan wax loogu talagalay taas. Si aad ugu haysatid Isbaanish, nooca Isbaanishka waa in lagu rakibaa.
ghiuan isagu wuxuu leeyahay:
raali gelin waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto qalab looga hadlo af Ingriiska iyo Isbanishka oo ah autocad 2009, tan iyo markii aan ku dhejiyey Ingiriis; laakiin waan ku faraxsanahay
Sawirada muujinaya asalka muuqaalka sawirka cad waa caddaan ku yaala istale oo aan jecelahay inaan baddalo midabkiisa asalka ah ?????
Andrea Varon isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan muddo dheer naqshadeeye ahaa oo waxaan adeegsan jiray autocad in ka badan sannadihii 8, waxaan gacanta ku dhigay ku dhawaad ​​dhammaan noocyada laga soo bilaabo R13 illaa hadda kan ugu fiican aniga ayaa ah 2008. Waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo SketchUp waa mid aad u fudud oo aad wax ka qaban karto waxaana jira ilo badan oo internetka ah oo ku saabsan barashadaada. 2D, 3D, Sawirka Terrain (ma qiyaasi kartid wax walba oo la samayn karo), xagga injineernimada, naqshadaha, naqshada garaafka, naqshadaha warshadaha, naqshadeynta farsamada, infographics, iwm. Anigu shaqsi ahaan waxaan qabaa inay tahay barnaamijka ugu wanaagsan ee ay qabteen. Xitaa waxay leedahay dhejisyo si ay u soo saarto warbixinnada qiimaha iyo tirada shaqada. Waxaan ku talinayaa.
Raadi wakiilkaada AutoDesk ee Colombia, waxaa jira koorsooyin guud oo loogu talagalay ardayda kharash yar yar iyo xitaa waxaa dhici karta in deeqo waxbarasho la siiyo
Axada Axadda isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan ku heli karaa autocad 2009 oo qaadan koorasyada u dhiganta
ING Marcelo. isagu wuxuu leeyahay:
2008 WAA MAXAY XASUU, ma doonayo inaan imaado 2009
Dhab ahaantii, waxaan soo qaatay 2004 2005 ee OR, sababta aan isugu dhibayo 2008 AANAY haystaan ​​qalab gacan HOR BARNAAMIJKA muuqataa ABANZAR kuwa ka dambeeya dhacaya.
Ing.Jose CORREA isagu wuxuu leeyahay:
Autocad 2009 waa mid aad u fiican oo waxtar leh oo la isticmaalo maxaa yeelay waxay naga naga badbaadineysaa waqti badan maadaama ay leedahay dhammaan qalabka ugu fudud ee loo isticmaalo guddiyada tooska ah. Laakiin inta badan gb waa inaan haystaa kombiyuutarkayga si aan u isticmaali karo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, maaddaama ay dhacdo badan markaan isticmaalayo ...
"Autocad 2009" waa mid aad u fiican way xanuunsataa inay tahay inaad lahaato xasuus ka sarreeya wixii i gb maxaa yeelay way qufulan tahay, waana ay igu jabisaa inaad hal bil oo keliya u isticmaali karto
sababtoo ah wuxuu iga codsanayaa chodogo firfircoon oo aanan ka helin meel! Haddii aad i caawin karto, waan ku qanacsanahay.
Waxaan u maleynayaa in tani ay CAD cusub waa waqti lumis iyo lacag by kharaj shuruudo aad u tiro badan oo ku saabsan xeerarka iyo waxyaabo kale, sidaa ugu dhaqsaha badan 2008 waa ka fiican oo runta arki doonaa farqiga u lahayn in isticmaalka barnaamijyadaan
pedro herrera isagu wuxuu leeyahay:
waa warbixintii ugu fiicnayd ee aan akhriyay ku saabsan autocad 2009, ugu dhameystiran iyo ujeedo, mahadsanid
cmartinez isagu wuxuu leeyahay:
Dhamaan kuwa ooyaya sida 2009 autocad u shaqeyso waa labo shay oo keliya, mid aan aqoon u laheyn wax kombiyuutar ah isla markaana aan aqoon sida loo habeeyo jawiga autocad, hadii ay tahay ****** iyo sidoo kale barnaamijiyaasha barnaamijyada »Haddii aad sidoo kale noo oggolaato inaan ka qaadno, haddii aadan jeclayn qalabyada cusub ka dibna soo gal shaashad mid kale oo ah autocad hore ama midka aad jeceshahay ama aad si fudud wax uga beddeli karto. Hadda haddii ay isticmaasho ilo badan waa caadi maxaa yeelay waa in la iibiyaa qalab cusub waa suuq-geyn saafi ah, laakiin sidoo kale ha u isticmaalin iyada oo la adeegsanayo '3 pentium' oo leh roog 256, oo ogow inay tahay jaantus garaaf ahaan xusuusta fiidiyoowga ee 48 -64 megas kuma filna Waxaan heystaa p4 3.0 oo leh 2g ee wananka iyo nvidia8600 ee 512 waxaanan haystaa mashiin badan si aan ugu isticmaalo 2009. Ha ka hadlin badeecad haddii aadan aqoon waxa gadaal ka dhici doona.
Haddii wixi kaaga shaqeynayo, ha baddelin xitaa haddii aan dib loo noqon karin, Autodesk ma badeli doonto fikradaheena
Haddii aad u socoto 2009, hubi inaad haysato xusuusta kugu filan, inaad barato inaad samayso waxa aad horay u qaadan karto saacado yar oo wax ka badan
Waxaan leeyahay AutoCad 2008, 2009 talinaynaa i gelinaya maxaa yeelay, dhammaan comments aragtida kor ku xusan, waxaan u maleynayaa in aad u xun, si fiican u tago 2008 ah .. ??
Waxaan ahaa qof isticmaala autocad 2009 wakhti yar; Barnaamijkani wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, hase yeeshee, nuqulkan, waxaan joojin doonaa isticmaalka, waa wax aan fiicneyn abid abid abuuray. Anigu ma rumaysan karo in ay sameeyeen noocan oo kale ah. Waa wax cajiib ah inta ilaha uu isticmaalayo si loogu daro TABS oo nacas ah oo aan u shaqeynin wax shucaac ah. Badana, aad u xun, waxaan dhihi lahaa, sababtoo ah haddii aysan si sharci ah u iibin, hadda way yar yahiin, sababtoo ah dad badan oo isticmaala, ama si khalad ah ayay u iibsan doonaan.
leif_erikson isagu wuxuu leeyahay:
autocad 2009 nomas maydhan biyaha, waxaan instaldo in CD waa hillaac ii 2008, ka sokow wax kaliya ee wanaagsan waa kuwan hooyooyinka ee toolbars Ribbon sida miskiinkii i xirtey waqtiga oo dhan, oo waxaan hadhay ee khaladaad ka dhigi
haddii qof uu heysto habka lagu saxo ama u sii gudbiyo xiriirka si aan u soo dejiyo 2008 markale
Waxaad tagtaa xafiiskiisa una dhiib isaga ... hehe
ama waxaad u dirtaa boostada
lilis isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaan u gudbin karaa khariidad qof kale
marlon castle isagu wuxuu leeyahay:
Hey eegto waxaan hore u leeyihiin 2009 autocad laakiin dhibaatada waxa ay mar horeba ku rakiban i weydiisto code hawshooda u ah laakiin waxaa ay leeyihiin faahfaahin ah in marka aan aado si crak for'ponerle balastar soo diro iga qaldan iyo waxaan aadan geenera wax wanaagsan keygen rajo aan Hechen gacanta halkaas
Mauricio Gómez isagu wuxuu leeyahay:
Autocad 2009 waxay isticmaashaa 5 ama 6 khayraadyo badan oo ka badan 2008, waxayna leedahay dhibaatooyin badan oo leh xirmo. Si joogta ah ayuu u xidhaa oo abuuraa khaladaadka, wuxuu i xusuusinayaa 2000 version
rogelio antonio r isagu wuxuu leeyahay:
Sabuurka haddii q waa uu fiican yahay, laakiin ay dhacdo CAD auto 2009 map, kaas oo noqon doona horumarka maalin maalmaha ayaa iman doona dhalin oo ay ku jiraan cudriculas aad ku salaysan cordenadas aad arcview sida cad gashan images gif tif ecw iyo interfaces cusub si ay u abuuraan files kala duwan